Precision Engineering [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ > စက်မှုအင်ဂျင်နီယာပညာ > Precision Engineering
View Full Version : Precision Engineering
Thet Pai Myo
ကျွန်တော် လေ့လာမိသလောက် Precision Major ဟာ Engineering Role တစ်ခုအဖြစ် စတင်ခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့ သုံး၊လေး နှစ်လောက်ကမှ ပါ။ Major တစ်ခုအနေနဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာတောင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မဖြစ်တည်သေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကပဲ အရင်ဆုံးအစပြုတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ထင်တယ်။
ကို Thet Pai Myo ရေ....စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့၊ ဘာသာရပ်အကြောင်းရှင်းပြတာ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း၊ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါ။ ဖိုရမ်မှာ 'Precision engineering' နဲ့ M.Sc ပြီးထားတဲ့ အကိုတယောက်ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ယူပြီး၊ 'Precision engineering' ကို ဘန်ကောက်က AIT ဆိုတဲ့ Asian Institute of Technology မှာ၊ သင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ခုတလော အဲဒီ့အကိုလည်း၊ ပျောက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း တယောက်လည်း ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှ အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ယူပြီး၊ NUS လို့ခေါါတဲ့ National University of Singapore မှ မဟာသိပ္ပံကို၊ 'Precision engineering' ဘာသာရပ်နဲ့ယူခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါါမှာ 'Precision engineering' နဲ့ပက်သက်လို့၊ American Society for Precision Engineering, (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_for_Precision_Engineering) European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (http://www.euspen.eu/) နဲ့ The Japan Society for Precision Engineering (http://www.jspe.or.jp/english/) ဆိုပြီးထင်ရှားတဲ့ အဖွဲ့အစည်း (၃) ခုရှိပါတယ်။ American Society for Precision Engineering ကို (၁၉၈၆) ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ သိရလို့၊ 'Precision engineering' ဘာသာရပ်ကို၊ (၁၉၈၆) ခုနှစ်မတိုင်မှီကတည်းက၊ သီးခြားဘာသာရပ်တခုအဖြစ်၊ သင်ကြားနေပြီလို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ တိတိကျကျပြောရရင် အမေရိကန်မှ Cranfield တက္ကသိုလ်၊ Precision Engineering Institute မှာ၊ (၁၉၆၈) ကတည်းက precision machine tool design တွေကိုထုတ်လုပ်ရေးဆွဲတဲ့၊ 'Cranfield Unit for Precision Engineering' ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အတွက်၊ (၁၉၆၈) ခုနှစ်ကတည်းက၊ အသုံးချနည်းပညာဘာသာရပ်တခုအဖြစ်၊ တည်ရှိနေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
'Precision engineering' ဘာသာရပ်ဟာ၊ electrical engineering, software engineering, electronics engineering, mechanical engineering နဲ့ optical engineering ဘာသာရပ်တွေကို၊ subdiscipline အနေနဲ့၊ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုတဲ့၊ ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ applications အနေနဲ့အဓိက အသုံးချတဲ့နယ်ပယ်တွေကတော့ machine tools, MEMS လို့ခေါါတဲ့ Microelectromechanical systems, NEMS လို့ခေါါတဲ့ Nanoelectromechanical system နဲ့ optoelectronics နယ်ပယ်တွေဖြစ်သလို၊ design အပိုင်းကို၊ အဓိကဦးစားပေးပါတယ်။ အခြား နယ်ပယ်တွေမှာလည်း၊ အသုံးချတာတွေ့ရပါတယ်။
'Precision engineering' ဘာသာရပ်ရဲ့ အဓိကဦးတည်ချက်ကတော့၊ Createahighly precise movement, Reduce the dispersion of the product's or part's function, Eliminate fitting and promote assembly, especially automatic assembly, Reduce the initial cost, Reduce the running cost, Extend the life span, Enable the design safety factor to be lowered, Improve interchangeability of components so that corresponding parts made by other factories or firms can be used in their place, Improve quality control through higher machine accuracy capabilities and hence reduce scrap, rework, and conventional inspection, Achieveagreater wear/fatigue life of components, Make functions independent of one another, Achieve greater miniaturization and packing densities နဲ့ Achieve further advances in technology and the underlying sciences တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်ထူးချွန်တဲ့ 'Precision engineer' တဦးဖြစ်လာပါစေလို့၊ ဆန္ဒပြုပါတယ် ကို Thet Pai Myo ရေ...
Reference : Precision Engineering, the Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology, (http://www.journals.elsevier.com/precision-engineering/#description) Precision Engineering Centre at Cranfield University, (http://www.cranfield.ac.uk/sas/precisionengineering/) History of Precision Engineering, (http://www.cranfieldprecision.com/history.php) Precision Engineering in Yorkshire (http://precisionengineeringyorkshire.co.uk/), NIST Programs of the Manufacturing Engineering Laboratory. March 2008., (http://www.nist.gov/el/) Venkatesh, V. C. and Izman, Sudin, Precision Engineering, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2007, page 6.
ကျေဇူတင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဆက်ပြီးပြောပြစေချင်ပါသေးတယ်။
ဟုတ်ကဲ့.... ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် အကို ထွန်း ခင်ဗျာ.... ကျွန်တော့်ရဲ့ လေ့လာမှု အားနည်းချက် ကိုဖြည့်ဆည်းပေးထားတဲ့ အတွက် အတိုင်းထက် အလွန် ၀မ်းသာပါတယ်။ဘာပဲ ပြောပြော Forum ကို ကြောက်စိတ် ကျွန်တော် မှာ နဲနဲ တော့ပျောက်သွားပြီ လို့ ခံစားလိုက်ရပါတယ်:D ကျွန်တော် ရဲ့ လပတ်စာမေးပွဲ တွေကြောင့်ရယ်၊ခဏ၀င်လာမိတဲ့ အချိန်မှာ Forum က အပိတ်ခံထားရတာကို တွေ့တာနဲ့ပဲ မေ၇ာက်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့....ကျွန်တော် ကြိုးစားပါမယ်။စာမေးပွဲ အတွင်း စာတွေနဲ့ လုံးပန်းလိုက်ရတဲ့အတွက် post ဆက်မရေးဖြစ်တာကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။